Suubban: Ku Bilow Adeeggaaga Sanduuqa Diiwaangelinta Qalabkaan Ecommerce | Martech Zone
Mid ka mid ah xanaaqa weyn ee aan ku aragno ganacsiga ayaa ah sanduuqa isqorista qurbaanno. Sanduuqyada macmiilku waa soojeedin xiiso leh… laga bilaabo xirmooyinka cuntada, alaabada waxbarashada carruurta, ilaa daaweynta eyga… tobanaan milyan oo macaamiil ah ayaa iska qortay sanduuqyada rukunka. Ku habboonaanta, shaqsiyeynta, ugubnimada, layaabka, gaar ahaaneed, iyo qiimaha ayaa ah sifooyinka oo dhan oo keenaya iibinta sanduuqa rukunka. Ganacsiyada ecommerce ee hal-abuurka leh, sanduuqyada rukunka ayaa faa'iido u noqon kara maxaa yeelay waxaad hal-mar wax-iibsadeyaasha uga dhigtaa macaamiil soo noqnoqota.
Suuqa eCommerce wuxuu ku kacayaa $ 10 bilyan (marka laga reebo Amazon Prime iyo ikhtiyaarkeeda "subscribe and save").
Inta badan softiweerka rukunka wuxuu ula dhaqmaa rukumashada sida kaliya astaamaha meheraddaada: nooc bay ku taageeraan, laakiin badanaa waa mid aan casriyeyn oo si fudud ugu dhex milmin ganacsigaaga ama websaydhka jira. Xaaladaha kalena iyagu si fudud uma diiwaangeliyaan-marka hore, bedelkeedana waa suuq-koowaad ama degel-dhise ugu horreeya.
Waxaa jira waxyaabo badan oo adag oo ku jira sanduuqa rukummada ee awoodaha ganacsiga e-commerce. Bixinta weyn waxay ku jirtaa maamulka xisaabta, xulashooyinka shakhsi ahaaneed, codsiyada daahitaanka, beddelka, otomatiga, iyo - dabcan - habka lacag bixinta ee ku saleysan rukunka. Inta badan meheradaha ganacsiga e-commerce ee caanka ah kuma soo daraan awooddan barnaamijyadooda… oo u baahan is-dhexgal dhinac saddexaad ama horumarin caadadeed si ay dhammaan uga wada shaqeeyaan si habboon.
Suugaan: Isugeynta Bogga Macaamilka Ecommerce
Waxaan ku caawinayaa shirkad hadda si aan u ogaado dhammaan xulashooyinkooda si ay adeegyadooda uga saaraan dhulka oo la ogaado Subly. Suugaan ahaan waxay bixisaa astaamaha sanduuqa rukummada ee soo socda oo udub dhexaad u ah barnaamijkooda:
Bixinta biilka - Lacag ka qaado macaamiishaada si isdaba joog ah adoo aan gacanta ku qaban wax. Marka macaamilkaaga la qoro, Subbly ayaa daryeeli doona inta hartay si aad ugu nasan karto kalsooni adigoo og in dakhligaaga soo noqnoqda uu imaanayo usbuuca, bisha, ama sanadka soo socda.
Iska yaree taariikhaha & dejiso taariikha cusboonaysiinta - Biil u soo dir dhammaan macaamiishaada maalin kasta maalin isku mid ah, u deji maalin goynta maalinta alaabada, oo dooro maalinta ay soo dirayaan macaamiishaadu. Biilasha iyo shixnadaha ku habboon baahidaada ganacsi.
“Dhisme-sanduuq” iyo baahiyo kale oo biilal adag leh - Ma dooneysaa inaad u oggolaato macaamiishaada inay kuu habeeyaan diiwaangelintooda adoo kala jaan qaadaya xulashooyinka, ama dooranaya badeecooyinka ku jira gudaha rarkooda? Meel dheer ha u eegin, Subbly wuxuu leeyahay dhisme sahan gaar ah si loogu oggolaado rukhsadaha la beddeli karo ee macaamiishaada iyo inuu kuu oggolaado inaad bixiso khibrad qaas ah.
Wareegyada biilasha iyo wareejinta maraakiibta - Bille, Toddobaadle, Sannadle, Saddex-biloodle iyo wixii ka dambeeya! Isku dar maraakiibta wareejinta iyo biilinta si aad ugu habboonaato baahiyahaaga soo noqnoqoshada biilasha iyo rarka Waxaad sidoo kale u oggolaan kartaa macaamiishaada inay doortaan waxa ay doorbidaan inta lagu jiro wax iibsiga.
Soo kabashada lacag la'aanta ah - Bixinta bixinta kaarka waa niyad jab! Hoos u dhac ikhtiyaari ah ayaa lagu yareyn karaa qalabkeena dib u soo kabashada ee lacag la'aanta ah iyo otomaatiga.
Muddooyinka tijaabada - U oggolow macaamiishaadu inay tijaabiyaan sanduuqa ku-qoritaanka saamiga ee qaddarka ka hooseeya oo ha ku cusbooneysiiyaan wareeg ka gaaban kan caadiga ah qiimaha buuxa ee rukunka caadiga ah.
Muddooyinka ballanqaadka - Ku burburi qiiq xilliyo u heellan. Bixi rukumo 12 bilood ah oo bil kasta la bixiyo oo aad bixiso qiimo dhimis si loogu dhiirrigeliyo macaamiisha inay sameeyaan.
Subbly sidoo kale waxay la midoobi kartaa dukaanka jira Wix, Soo iibso, Barxadda WooCommerce, Weebly, ama laguugu daro websaydhkaaga hadda jira.
Subbly waa aasaas ahaan rukummada ugu horreysa ee meheradda ganacsiga. Oo ay weheliyaan dhise degel, socodsiinta shaqooyinka, maraakiibta & isdhexgalka saadka, suuqgeynta & kobcinta aaladaha, maareynta macaamiisha (CRM), iyo astaamo kale… waa madal aad u wanaagsan oo sii wadaysa inay sii kordhiso waxyaabaha ay bixiso.
Isku day Suugaan Si Bilaash ah
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriir xiriiriye Subly dhammaan qodobkan.
Tags: CRMhannaanka ganacsigadukaankaboodadahoos u dhigidsanduuqa isqoristamadal sanduuqa rukunkaadeegga rukunkaweeyalwixwoocommerce